Kooxda Toddobaadka ee horyaalka Spain Iyo Ragga Ku Kulmay
HomeSpainKooxda Toddobaadka ee horyaalka Spain Iyo Ragga Ku Kulmay
Kooxda toddobaadkan dhamaaday ugu fiicnayd horyaalka dalka Spain ee La Liga ayaa waxa si wada jir ah u hoggaaminaya xiddigaha xafiiltanku ka dhexeeyo ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Sida lagu shaaciyey qiimaytan oo ay shamaysay Goal.com, Goolwadihii ugu fiicnaa toddobaadkan ayaa noqday Iker Casillas kaas oo bandhig ciyaareed dadka aamusiiyey ku soo bandhigay kulankii ay kooxdiisu 2-0 kaga badisay Rayo Vallecano.
Difaaca waxa si wada jir ah loogu doortay Lillo oo ka tirsan Eibar, Nicolas Otamendi Oo Valecia ah iyo Jose Gimeneze oo Atletico Madrid ka tirsan.
Khadka dhexe waxa toddobaadkan ugu wanaagsanaa James Rodriguez oo Real Madrid ka tirsan, Fredy Hinestroza oo Getafe ah, Xavi oo ah kabtanka Barcelona iyo Adri Embarba oo xarfad ku dawakhiyey Real Madrid kulankii Rayo Vallecano.
Weerarka waxa si wada jir ah u hoggaaminaya Cristiano Ronaldo oo Arbacadii dhaliyey goolkiisii 300aad ee intii uu Real Madrid joogay, Lionel Messi oo gool qurux badan oo la soo xooday ka dhaliyey Almeria iyo Filipe Cicedo oo laba gool u dhaliyey Espanyo kulankii ay 3-0 ku karbaashtay Villarreal Khamiistii.
Mark Noble Goal West Ham United vs Crystal Palace 1 – 1 31/01/2018 HD
Manchester United Oo ka Takhalustay Ipswich Tartanka Capital One Cup
Juventus vs Inter 0-0 – FULL Highlights